Lalao video 5 napetraka tany Afrika tokony hojerenao
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Lalao video 5 napetraka tany Afrika tokony hojerenao
Ny filalaovana dia manondro filalaovana elektronika amin'ny alàlan'ny telefaona finday, konsole ary solosaina.
Ny indostrian'ny lalao any Afrika dia vinanin'ireo tanora tanora, lalàna manodidina ny filokana amin'ny lalao an-tserasera, ary ny vola miditra rehetra.
Ny tanora tanora atsy Afrika dia antenaina hampiakatra 50 isan-jato amin'ny 2025, fehezan-dalàna izay manakiana ny hoavin'ny lalao any amin'ny faritra. Ny fitomboan'ny tsenan'ny lalao video any amin'ny faritra dia azo lazaina ho fiakaran'ny fironana amin'ny fisian'ny sy ny lazan'ny console lalao misy fampiasa maro. Ny filalaovana an-tserasera dia nanjary azo ampiharina eto Afrika miaraka amin'ny fitomboan'ny fifandraisana haingam-pandeha
Afrikana an-tapitrisany no faly nankafy lalao finday sasany voalohany noho ny fitomboan'ny finday finday haingana tato ho ato sy ny fandrakofana natolotry ny mpanome finday.
Ny roa ampahatelon'ny olona monina any Afrika atsimo, Kenya, Ghana, ary Oganda dia afaka miditra amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny finday ka mahatonga azy ireo ho tsena lehibe amin'ny filalaovana
Africa South dia mitarika ny atiny amin'ny drafitra hamoahana ny fifandraisana 5G miaraka amin'ireo manampahefana mikendry ny 80 isan-jaton'ny mponina manana fidirana amin'ny Internet amin'ny 2024. Ny indostrian'ny lalao dia mitondra dolara an-tapitrisany ho an'ny firenena toa an'i Kenya, Nizeria, Uganda, ary ambony hafa mpandrindra ao amin'ny faritra afrikanina amin'ny sokajy videogames rehetra amin'ny finday, Personal Computer (PC), Xbox, ary PS.
Betsaka ny mpamorona mazoto eran'izao tontolo izao no liana amin'ny kolontsaina samihafa manerana an'i Afrika izay nahita ny indostrian'ny lalao tany Afrika na dia mbola manomboka aza ny fivoaran'ny console lalao eto amin'ity faritra ity.
Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hahafantatra lalao video dimy izay malaza amin'ny Afrikana.
Tekken 7 dia nasongadina tao amin'ny Africa eSports Championship (AEC) noho ny lazany eo amin'ny faritra. Tekken dia lalao iray malaza eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny sary sy lalao mahafinaritra. Raha te hahazo ny traikefa lalao arcade tsara indrindra ianao dia mandehana mandeha amin'ny motera tsy tena izy izay manome hery ny fizika ao Tekken.
Tekken 7 kosa no voalaza fa ho toko farany amin'ny lalao ary tsy faly ireo mpankafy afrikanina noho ny fitiavany ny lalao
Nahasarika mpilalao maro manerana an'i Afrika ny lalao satria malaza marobe eto amin'ny kaontinanta ny lalao Multiplayer. Overwatch dia novolavolain'i Blizzard niaraka tamin'ny mpitifitra multiplayer voalohany izay azo jerena ao amin'ny consoles gaming sy PC. Azonao atao ny manatevin-daharana ny namanao hilalao miaraka aminao amin'ny fisafidianana endri-tsoratra 30 mahery.
Ny maody laharana, ny arcade mode, ary ny maodely milalao mahazatra dia endri-dalao amin'ny fihoaram-pefy, ary toy ny fifaninanana tena izy, azonao atao ny milalao mpitifitra multiplayer mahazatra.
Ireo tia ny lalao eran'izao tontolo izao dia tia sy milalao FIFA ary mianiana fianianana mihitsy aza noho izany. FIFA nandritra ny taona maro dia nijanona ho safidy voalohany indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mpilalao ary toy izany koa ireo any Afrika na dia miatrika fifaninanana henjana aza toy ny mpilalao baolina kitra PES ankehitriny.
Ireo firenena afrikanina toa an'i Kenya, Ghana, Morocco, ary Nizeria dia variana amin'ny lalao baolina kitra ka mahatonga azy io ho fanatanjahantena malaza any amin'ny faritra.
Fanatanjahantena marobe toa ny Cricket, baolina kitra, tenisy ary baskety no ampahany mahazatra amin'ny fomba fiainana afrikanina izay nahita ny olona nilalao tamin'ny sehatra toa azy Lalao Crazy, ary Friv.
Miaraka amin'i Mzito, mila manavotra an'i Afrika amin'ny kolikoly taloha ianao amin'ny alàlan'ny toerana 15 samy hafa ka hahatonga azy ho lalao video ankafizin'i Afrika satria ireo sary sy singa ampiasaina amin'ny lalao dia mitaona aingam-panahy avy amin'ny kolontsaina afrikana.
Hahita fanahy sy tarehin-tsoratra afrikanina taloha ianao izay hahatonga ny lalao hahafinaritra kokoa ary ny tanjona dia ny manampy amin'ny famonjena sy fampiraisana an'i Afrika ary hahazoana isa betsaka araka izay tratrao. Afaka alaina maimaimpoana ho an'ny mpampiasa Android sy iOS ny lalao.
Fantatra fa tia miloka ny Afrikanina ary manao azy ireo tsy tapaka izy ireo ho toy ny fomba hahazoana vola fanampiny.
Poker dia tsy azo lavina fa lalao filokana malaza indrindra eran'izao tontolo izao ary lalaovin'ny Afrikana na amin'ny telefaona finday. Ny lazan'ny lalao hafa dia noho ny firongatry ny filokana an-tserasera. Ankehitriny dia afrikanina maro no miloka amin'ny filokana mivantana amin'ny tranokala filokana ary afaka mahita olona antitra milalao ny lalao amin'ny karatra napetrakao ihany koa ianao.